Baarlamaanka Soomaaliya oo la weeraray - BBC Somali
Baarlamaanka Soomaaliya oo la weeraray
24 Maajo 2014
Dhismaha Baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa weerar lagu soo qaaday iyadoo xildhibaanada ay ku jireen fadhigii caadiga ahaa.
Sagaal ciidamada dowladda iyo iyo askari AMISOM ah ayaa ku dhintay weerarka al-Shabaab ay ku qaadday maanta dhismaha Baarlamaanka Soomaaliya, waxaa ku dhaawacmay in ka badan labaatan oo ay ku jiraan Afar xildhibaan.
Ugu yaraan hal qarax ayaa la maqlay, waxaana xigay dhawaqa rasaas xoogan oo la iksu weydaarsanayey gudaha dhismaha baarlamaanka.
Mid ka mid ah xildhibanaada ka qeyb-galayey fadhigii maanta Cabdiladhiif Sanyare oo ku jiray gudaha baarlamaanka ayaa BBC-da u sheegay in markii qaraxa la maqlay la joojiyey fadhigii, kadibna la bilaabay in xildhibaanada laga saaro dhismaha.
Dhismaha waxaa ilaaliyo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliy.
Weerarka oo socday muddo shan saacadood ah ayaa waxa uu dhammaaday shantii iyo barkii galabnimo, kadib markii la dilay dhammaan dagaalyahaniinta al-Shabaab ee weerarka soo qaaday oo lagu sheegay inay ahaayeen toddobo qof.
Wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in caawa uu is casilay wasiirkii ammaanka ee dowladda Cabdikariim Xuseen Guuleed, oo uu kaga dhawaaqay idaacadda Raadiyo Muqdisho ee ku hadasha afka dowladda.
Wasiirka ayaa waxa ay aad isugu dhawaayeen Madaxweyne Xasan Shiikh.
UN oo cambaaraysay dilka xildhaan Mursal
Muqdisho: Qarax lagu dilay xildhibaan
21 Abriil 2014